इको कथासंग्रह ‘ब्लु प्लानेट’ सार्वजनिक | साहित्यपोस्ट
इको कथासंग्रह ‘ब्लु प्लानेट’ सार्वजनिक
साहित्यपोस्ट प्रकाशित १३ आश्विन २०७८ २०:४७
विजय हितानद्वारा लिखित इको कथासङ्ग्रह ‘ब्लु प्लानेट’ सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो कृतिमा हितानले आजको विश्वव्यापी वातावरणीय समस्या र तिनको निराकरणका उपायहरूलाई कथाको स्वरुप दिएका छन् ।
सङ्ग्रहभित्र १५ वटा पर्यावरणीय कथाहरू रहेका छन् । तिनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, वन्यजन्तु चोरीशिकारी, बाढीपहिरो, जल तथा वायु प्रदूषण, वातावरण संरक्षण अभियान, विश्वव्यापी तापक्रम बृद्धिजस्ता विषयवस्तुलाई समेटेका छन् ।
वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका हितानको यो कथासङ्ग्रहलाई फिनिक्स बुक्सले प्रकाशनमा ल्याएको हो ।
स्वच्छन्द सुसेलीहरु २ः एक नव–आन्दोलन स्थापनार्थ समर्पित विजय
डा. गोविन्दराज भट्टराई २८ श्रावण २०७८ १५:१४
निबन्ध – विनाशको बाटो
९ असार २०७८ ११:५४
‘ब्रह्माण्डको निलो ग्रह यस धरतीमा पर्यावरण सन्तुलन, वातावरण संरक्षण र प्राणी–वनस्पतिबीचको प्राकृतिक चक्र नियमित गर्न सक्रिय हितान पर्या लेखन अर्थात् ‘इको राइटिङ’का अथक योद्धा हुन्,’ भनेर प्रकाशकद्वारा आफ्नो प्रकाशकीयमा लेखिएको छ ।
कथाकार हितानका अनुसार आजसम्मका हाम्रा प्रायः सबै साहित्यिक सिर्जनाहरू मानवकेन्द्रित छन् । मानवीय अतिक्रमणमा परेर पृथ्वीको पर्यावरण असन्तुलित बन्दै गैरहेको छ । तर विडम्वना, मानवीय सभ्यता नै धरापमा पर्न सक्ने यस्तो जटिल समस्याबाट हामी अनभिज्ञ छौँ । यसर्थ अब हाम्रा साहित्यिक सिर्जनाहरू मानवेत्तर जगततिर केन्द्रित गरेर पृथ्वीको पर्यावरणीय संरक्षण, संबर्धन र प्रबर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस कथासङ्ग्रहमा नेपालमा इको राइटिङलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो ‘उत्तर आधुनिक विमर्श’ पुस्तकमा सिद्धान्तीकरण गरेका प्रा. डा. गोविन्दराज भट्टराईको भूमिका रहेको छ ।
गत एक दशकभन्दा बढी पर्यावरण साहित्यलाई नेपाली मूलधारको साहित्यमा भित्र्याउने अभियानमा खटिएका हितानको यो आठौँ साहित्यिक कृति हो । यसअघि थकित पृथ्वी, इको उत्सर्जन, बाग्मती ब्लुज, स्वच्छन्द सुसेलीहरूजस्ता कथा, निबन्ध र कविताकृतिहरू प्रकाशन भैसकेका छन् ।
ब्लु प्लानेटविजय हितान
क्रिकेट अभ्यासीको मानवजीवनको यथार्थतासँग नजिक रहेकाे उपन्यास – एक युवक
युद्ध साहित्य गोष्ठी आयोजना गरिने